Bilaogera Alzeriana voaheloka folo taona an-tranomaizina, mampiseho indray ny fanafihana ny fahalalaham-pitenenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2018 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, English, Italiano, Español, English
Merzoug Touati. Sary nozaraina tao amin'ny pejy facebook tao amin'ny bilaoginy Alhogra
Nomelohin'ny ny fitsaràna Alzeriana iray ao an-tanàndehiben'i Bejaia tamin'ny 24 May folo taona an-tranomaizina ilay bilaogera Merzoug Touati . Ny heloka nataony? Nitatitra tamin'ny aterineto momba ny fitokonana manohitra ny fepetra henjana, ny hetsi-panoherana mitaky ny fanomezana asa, ary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nataon'ireo manampahefana Alzeriana.
Touati, izay efa nogadraina nanomboka hatramin'ny volana Janoary 2017 dia voaheloka noho ny fanomezana “vaovao ho an'ireo sampam-pitsikilovana vahiny izay noheverina fa mety hanimba ny miaramila na ny fifandraisana ara-diplomatika any Alzeria na ny tombontsoany ara-toekarena”, noho ny fitarihana sy ny famoahana antserasera ny antsafa niarahana tamin'ny manampahefana Israeliana iray.
Tamin'ny 9 Janoary, 2017, nandefa ny antsafa izay niarahana tamin'i Hassan Kaabia i Touati , mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Isiraeliana ho an'ny fampitam-baovao miteny Arabo tao amin'ny YouTube sy tao amin'ny bilaoginy Alhogra, izay tsy ao anaty aterineto intsony io. Nifantoka tamin'ny hetsi-panoherana sy ny korontana izay nipoaka tany amin'ny faritany avaratr'i Bejaia sy tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny firenena ilay antsafa, niaraka tamin'ireo Alzeriana nanohitra ny fametrahana ny fepetra henjana, anisan'izany ny fisondrotan'ny haba sy ny hetra, ary ny fihenan'ny famatsiam-bola amin'ny solika.
Nanontany an'i Kaabia i Touati tao anatin'ilay antsafa momba ny fanambarana nataon'ilay minisitry ny governemanta Alzeriana fa nisy ny fitsabahan'ny hery vahiny tamin'ny raharahan'ny firenena sy nanomanana ny hetsi-panoherana. Nandà ny fitsabahan'ny Isiraeliana tamin'izany i Kaabia .
Nilaza tamin'i Touati ihany koa i Kaabia fa talohan'ny taona 2000 dia nisy “fifandraisana” teo amin'ny governemanta Alzeriana sy Isiraeliana, saingy tsy afaka nanamarina izy raha nampiantrano birao diplomatika izay nisolontena an'i Israely i Alzeria teo aloha.
Tsy nankato tamin'ny fomba ofisialy na nanana fifandraisana diplomatika tamin'i Isiraely i Alzeria sy ireo governemanta ligy Arabo hafa, ankoatra an'i Egypta sy Jordania, noho ny fibodoan'ny Israeliana ny faritany Palestiniana. Na izany aza, nitana ny fantsona fifandraisana niaraka taminy ny governemanta sasany ankehitriny sy ny teo aloha ary nampiantrano birao nisolontena an'i Isiraely. Matetika tazonin'ny governemanta arabo ho tsiambaratelo ny fifandraisana toy izany noho ny fanohanan'ny vahoaka ny Palestiniana ao amin'ny faritra.
Andrasana hampakatra ny fitsarana i Touati amin'ny herinandro hoavy.
Tao amin'ny fanambarana an-gazety iray, nilaza ny lehiben'ny Amnesty International any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, Heba Morayef hoe:
Mbola porofo fanampiny ny fisamborana an'i Merzoug Touati, ny fitsarana azy sy ny sazy azony fa mbola voarahona ny fahalalaham-pitenenana any Alzeria, ary mbola mampiasa lalàna famoretana maromaro ny manampahefana mba hamoretana ny mpanohitra.
Atao fahirano ny fahalalaham-pitenenana any Alzeria ary farany indrindra tamin'ny andiana fandrahonana ara-pitsarana mikendry ireo olona miampita ny tsipika mena ny fanamelohana an'i Touati. Maro ireo mpiseran'ny media sosialy, bilaogera ary mpanao gazety izay mitsikera ny filoha marary Abdelaziz Bouteflika (izay efa nitondra ny firenena nanomboka hatramin'ny taona 1999), ny polisy, ny fitsarana ary ny fikambanana ara-pivavahana no iharan'ny fandrahonana ara-pitsarana avy amin'ny manampahefan'ny fanjakana.
Manefa sazy an-tranomaizina mandritry ny telo taona ilay bilaogera Slimane Bouhafs noho ny lahatsoratra nolazaina fa nanevateva ny finoana Islamo. Ary nigadra efa ho herintaona izao i Saïd Chitour, mpandrindra ny fampitam-baovao sady mpanao gazety izay niasa ho an'ny sehatra fampahalalam-baovao iraisam-pirenena toy ny BBC sy ny Washington Post. Niampanga azy ho “niray tsikombakomba tamin'ny hery vahiny” ny manampahefana Alzeriana.
Na dia teo aza ny fandrahonana sy ny fameperana, maro ireo mpikatroka no nivory tao Bejaia ny takarivan'ny 6 Jona nangataka ny famotsorana an'i Merzoug Touati.
Rassemblement en ce moment à la place Said Mekbel à #Bejaia pour la libération de #MerzougTouati.#Algériepic.twitter.com/LskbyEHWey
Fihaonambe amin'izao ora izao ao amin'ny kianja Said Mekbel ao Bejaia ho famotsorana an'i MerzougTouati.
Moa hisy handre ve ny antson'izy ireo? Sa mbola hodiana mitampin-tsofina indray izy ireo?